Akara akwukwo, akwukwo akwukwo, akwukwo okwu | Ugbu a, dee akwụkwọ edemede
Ihe ederede. Ndụmọdụ. Ntughari.
Iwu ngwa ngwa
Anyị enyerela ụmụ akwụkwọ aka dee ihe karịrị afọ iri na asatọ
Bachelor adian , Nna ukwu adian , Ọrụ ụlọ
Dị ka anyị arbeiten
Na-arịọ maka onyinye na-abụghị iwu ka ị nweta ụgwọ maka iwu gị.
Anyị ga-akpọtụrụ gị ma mepụta nzuzo gị nke ukwuu, kpọọ aha
Mgbe ị nwetachara ego ole na ole, ọrụ amalite.
Ga-enweta nnyefe ele mmadụ anya n'ihu. Nzọụkwụ 3 & 4 na-emegharị ruo mgbe arụchara ọrụ ahụ na afọ ojuju gị.
Ahịa na nnyefe oge
Anyị na-enyere aka na akwụkwọ edemede, ihe ọmụmụ bachelor, usoro nnabata, ihe ngosi na ọtụtụ ndị ọzọ!
banyere Kindsdị 30 nke ọrụ
Ihe karịrị 600 Ndị Ọ Ga-achị
ịnye ọzụzọ maka nchekwa
Ọrụ a na-arịọkarị
Oge nnyefe malitere: Oge 7
Oge nnyefe malitere: Oge 14
Oge nnyefe malitere: Oge 21
Okwu ode akwukwo
Nzukọ: n'otu n'otu
Studentsmụ akwụkwọ nwere afọ ojuju
reviews nke ụmụ akwụkwọ
Onye njikwa ahụ nwetara m ozi dị mkpa n'aka m ka ọrụ wee gaa nke ọma.
Hans	21 / 10 / 2021 bachelor tesis
Usoro zuru oke, echetụbeghị m na ọ ga-adị mfe. A haziri ihe niile n'ụzọ zuru oke, nyere isi mmalite, ntinye akwụkwọ ziri ezi tinyekwara akwụkwọ mkpuchi.
Verena	23 / 08 / 2021 nna ukwu edemede
Achọghị m akwụkwọ mpempe akwụkwọ, naanị ezigbo echiche na ihe atụ dị ka ndebiri - nke ahụ bụ kpọmkwem ihe m nwetara na ọ nyeere m aka nke ukwuu.
n’ikpeazụ ọrụ na-adighi ewepụta ego n’akpa ụmụ akwụkwọ dara ogbenye
Usoro	01 / 10 / 2021
jiri ọlyụ ọzọ. mfe ma ngwa ngwa ya mere m hụrụ ya n'anya
Daalụ maka nrubeisi
ị gbapụtara m oge ọzọ m ga-abata na mbụ
Akwụkwọ na-enye enyemaka dị m mkpa. Enwere m ike ịdabere, nke ahụ dị m mkpa.
Akwụkwọ ederede anaghị enye gị otu ngalaba a pụrụ ịdabere na ya maka nke gi Ọrụ ụlọ, bachelor tesis ma ọ bụ nna ukwu edemedekamakwa otu editọ ahụmahụ, onye magburu onwe ide ọrụ inwe.
Ndị editọ anyị nwere ọkaibe ọkachamara Mmụta na ndị nkụzi gbaara agbazi nwere ọtụtụ afọ n’ọzụzụ n’ọtụtụ ebe ndị ọkachamara.
Kpọtụrụ & kọntaktị ngwa ngwa
Are na-akpọtụrụ anyị mgbe niile Otu nkwado. Ahịa ọrụ dị ezigbo mkpa ka Papernerds.
ezi uche na-abịa mbụ na akwụkwọ akụkọ. Na mgbakwunye na nkwurịta okwu ezoro ezo na enweghị aha, anyị na-agbaso nchedo data.
Chọrọ enyemaka na ọrụ na asụsụ mba ọzọ? Nsogbu adịghị! Ndị otu anyị nwere ọ willụ ga-enwe ọ toụ ịdụ gị ọdụ na nke anyị Isiokwu na asụsụ.
Nwere ike ịdabere na ọrụ sayensị nke Akwụkwọ akwụkwọ. Anyị nwere ụkpụrụ nduzi siri ike nye ndị edemede anyị. Enweghị ọrụ ohi, enweghị nsonaazụ ọ bụla.
A na-agụgharị ọrụ sayensị ọ bụla site na agụmakwụkwọ nke abụọ na nhazi ya na onye edemede. Kọmputa Kọmputa na-eme ihe ọ bụla ịpụ iche.
Ọ ga-amasị m ka edere m ọrụ m
Ego ole ka ọ dị iji dee akwụkwọ agụmakwụkwọ?
Ọnụ ego nke ọrụ na Papernerds dabere n'ezie na mpaghara ebe a ga-ede ọrụ ahụ, ụdị ọrụ ọ bụ, dị ka akwụkwọ okwu, akwụkwọ bachelor ma ọ bụ edemede mmụta na peeji ole, ntụaka, wdg.
Ya mere, o siri ike karie ikwu okwu doro anya banyere ego ole ị ga-akwụ.
O sina dị, ị nwere ike nweta a arịrịọ anaghị ejikọ ịtọ ma ọ bụ a Hazie a aloiji dokwuo anya ajụjụ niile tupu oge eruo.
Ogologo oge ole ka ịchọrọ ide akwụkwọ?
Ihe niile dabere: Dabere n'ụdị ọrụ na omimi nke nyocha akwụkwọ, ndị editọ anyị nwere ike 7-31 ụbọchị mkpa. Enwere ike ide akwụkwọ ederede nwere peeji 5 na ụbọchị asaa, mana edemede nke nna ukwu nwere peeji 60 na-ewe ogologo oge.
Ebe ọ bụ na ndị na-ede akwụkwọ na-arụkọ ọrụ na ezigbo ndị ode akwụkwọ sitere n'ọtụtụ mpaghara agụmakwụkwọ, ọ bara uru, ọkachasị maka ihe ruru eru, iji nye nkọwa zuru oke n'oge dị mma. ase ịnapụta.
Dabere na oge, nhazi ọ bụla nwere ike ịmekwa ebe a.
Kedu nkwa m nwere na mpempe akwụkwọ?
Anyị maara mkpa ọ dị iji mepụta ọrụ gị n'ụzọ ziri ezi, na-ekwenye na asụsụ dị iche iche.
N'ihi nke a, anyị na-ekwe nkwa na ọrụ ọ bụla nke ndị ọrụ nwere nka, dịka Ndị nkuzi, Onye nyocha ma ọ bụ Ndị ndezi edere wee si na a Onye na-enyocha mpempe akwụkwọ na-enyocha.
Na mgbakwunye, a gaghị eji ọrụ ị kenyere maka mbipụta nke gị n'oge ọ bụla ọzọ. Ya mere, anyị na-ekwe nkwa 100% ezi uche na mmaafọ juru gị. Anyị na-emeziwanye ruo mgbe afọ juru gị.
Nye ka m nwere ike ịkpọtụrụ ma ọ bụrụ na m nwere ajụjụ ọ bụla?
Anyị nwere Nkwado ndị ahịa, onye i nwere ike inwe izugbe ajụjụ banyere okwu akwụkwọ, bachelor tesis, master tesis wdg e dere.
Oburu na inwee mkporita mbu na ndi oru ayi, onye neme akwukwo, dibia ma obu onye nyocha ekenye gi.
Kedu data ị chọrọ n'aka m?
N'ezie, ajụjụ a na-adaberekwa n'ụdị, akụkụ na mpaghara isiokwu.
Otú ọ dị, n'ụzọ bụ isi, ozi ndị a na-enyere anyị aka mgbe niile:
Ọnụọgụ nke ibe na isi mmalite
ihe ndi ozo choro (nyocha nke onwe, nyocha, wdg.)
nkwupụta nke m
Onye nwere ọrụ gị ga-agwa gị nke ọma ihe ndị ịchọrọ.
Kedu ọrụ ị na-enye?
Anyị na-akwado gị n'akụkụ niile nke ndụ agụmakwụkwọ:
Onye dere ya Ọrụ ụlọ, Bachelor adian, Nna ukwu adian, PhD adian na adian
Achingnye ọzụzọ maka nke ziri ezi Ugbu
Nyere aka Nnyocha akwụkwọ
Nkwado na Ajụjụ banyere ide akwukwo akwukwo, Mathazi, Ekwu, Akwụkwọ
Nyere aka Nyocha na aro isiokwu
nkwado ọ bụrụ na enwere nsogbu